श्रीस्वस्थानीमा पीएचडी गर्ने अमेरिकी डाक्टर भन्छिन: श्रीस्वस्थानी दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट व्रत कथा - Experience Best News from Nepal
श्रीस्वस्थानीमा पीएचडी गर्ने अमेरिकी डाक्टर भन्छिन: श्रीस्वस्थानी दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट व्रत कथा
प्रकाशित मिति : आइत, पुस २०, २०७६
वानोद वान्थाईन र केरोन वान्थाईनका सुपुत्री अमेरिका निवासी जेसिका वान्थाईन विरकेन्होल्ज अमेरिकाकै यूनिभर्सिटी अफ ईलिनोयसका सह प्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँ पहिलो पटक साँखुमा सन् १९९९ मा आउनुभएको थियो जत्तिखेर उहाँ बीए पढ्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि उहाँ सन् २००५, २००६, २००८ र २०१४ मा पनि केही दिनको लागि साँखुमा आउनुभएको थियो । उहाँले दक्षिण एशियाका महिलाहरुको परम्परा विषयमा विद्यावारिधी गर्नुभएको थियो ,यसै सिलसिलामा स्वस्थानी ब्रतकथामा पनि पीएचडी गर्नु भयो । त्यसै सिलसिलामा उहाँले साँखुको माधवनारायण स्वस्थानी व्रतको पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ उहाँसँग साँखुका संस्कृतिप्रेमी प्रविणराज श्रेष्ठको घरमा संस्कृति परम्परा र माधवनारायण स्वस्थानी व्रतका विषयमा लिईएको समसामयिक अन्तर्वार्ता ।
यस कारण बन्यो समुद्रको पानी नुनिलो : यस्तो छ पौराणिक कारण !!
यस्ता २० संकेत देख्नुभयो भने सम्झनुहोस्, नसोचेको धन आर्जन हुनेवाला छ !! के हुन् २० संकेत
काग तिहारको दिन कसैलाई थाहा नहुने गरी चुपचाप खरिद गर्नुहोस् ! यी ५ चीज कहिले हुनेछैन धनको कमि
तपाईंहरुलाई थाहा छ, कुन थरको गोत्र के हुन्छ ?